Zedify | Courier Franchise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»Zedify Franchise
Zedify ndiyo zero-emission solution yekutanga nekupedzisira mamaira kuburitswa mumaguta. Isu tinopa mabhizinesi nevhisi inosimudzira mhando yavo nekuendesa nenzira yavanoda.
Zedify yakasarudzika nzira yekubatanidzwa, zero emission shipping uye zviri nani kune guta uye shuviro yedu ndeyekushandura zvinhu zvemadhorobha nekugadzira iwo ane hutano, akawanda anorarama emangwana. Kununura nani kwemaguta ari nani.
Kununura mumaguta - dambudziko
Nzvimbo yemadhorobha iri kuchinja nekukurumidza; Kuwedzera kubvongodzwa uye kusvibiswa kwemazinga kuri kutungamira kuwana zvinoregedzwa zvichiita kuburitswa mumaguta zvakanyanya kuoma. Kwekupedzisira mamaira logistics ndiyo chikamu chidiki chakanakira chekutakura uye chinosvika kusvika makumi mashanu muzana wemutengo wakazara wekuendesa. Zvakare nekusaita basa, vatengi kazhinji havagone kuvimbiswa nguva windows uye nzira yekununurwa inoitwa kazhinji inowedzera kukonzeresa uye zvinokonzera kuwedzera kusvibiswa. Zedify inogadzirisa matambudziko aya uye inosimudzira mhando dzevatengi vedu nekuona kuti vatengi vanowana nenzira yavanoda.
Zedify inoshanda nekushandisa depots kumucheto kwenzvimbo dzemadhorobha inoita segedhi rezvinhu zvidiki zvinopinda nekubuda munzvimbo. Isu tinodzokorodza kumotokari dzemhando yepamusoro dzenzvimbo yemadhorobha tichivimbisa kuti tinokurumidza uye nekukurumidza uye tinokwanisa kurova iyo nguva yakatetepa windows vatengi vari kuda. Nekubatanidza kuburitsa kuenda kunzvimbo imwecheteyo, isu tinonyanya kushanda. Sezvo madhipatimendi edu ari padyo nenzvimbo dzatinosvitsa, tinogona kugadzira nzira ina dzakasunganidzwa pazuva, tichiita kuti utakurike uye hunokurumidza kuburitsa.
Vatasvi vedu uye nzira dzakarongeka kuburikidza neyedu tekinoroji pachikuva.
Zedify ine network ine rezinesi yeakazvimiririra zero emission shipping vanoshanda neiyo yakabatana brand, bhizinesi system uye yakagovana tekinoroji chikuva. Isu takarongedzwa zvakasarudzika kuyera netiweki yedu yekukura ye hubs mhiri kwe UK, ichipa mabhizinesi anoendesa zvinhu panguva imwechete ichiita yakanaka kumaguta edu.
Zedify parizvino iri kutarisa kumisikidza matsva muIpswich neBristol uye munguva pfupi pfupi mamwe maguta mhiri kweUnited Kingdom. Uyu mukana unonakidza wekumisikidza rako bhizinesi nerubatsiro uye rutsigiro kubva kune kambani vane ruzivo, hukama uye chiratidzo chinozivikanwa mudunhu rose rekutakura zvinhu